Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5.1.2 dhis aad tijaabo gaar ah
Waxa intaa dheer in lagu dahaadhay tijaabo on top of deegaanno jira, waxa kale oo aad ku dhisi kartaa tijaabo gaar ah. Faa'iidada ugu weyn ee habkani leeyahay waa control, haddii aad dhisayso tijaabo ah, waxaad samayn kartaa deegaanka iyo daawaynta in aad rabto in aad. Kuwani deegaanno tijaabo bespoke abuuri karaan fursado si ay u tijaabiso aragtiyaha in ay yihiin wax aan macquul aheyn si ay u tijaabiso in deegaan dabiici ah ka dhaca. The cillado ugu weyn ee dhismaha aad tijaabo gaar ah waa in ay noqon karaan kuwo qaali ah iyo in deegaanka in aad awoodi kartaa in la abuuro laga yaabaa in aysan haysan xaqiiqo nidaam dabiici ah ka dhaca. Cilmi-dhisidda ay tijaabo gaar ah sidoo kale waa in uu leeyahay istaraatijiyad ah qoranayaan ka qaybgalayaasha. Marka shaqeeya nidaamka hadda jira, cilmi yihiin muhiimad keeno tijaabo si ay ka qaybgalayaashu ay. Laakiin, marka cilmi dhiso ay tijaabo gaar ah, waxay u baahan yihiin in ay ka qayb-galayaasha in ay keenaan. Nasiib wanaag, adeegyada sida Amazon Farsamada Turk (MTurk) ayaa ku siin kara cilmi-hab ku haboon in ay ka qaybgalayaasha in ay tijaabo ay keenaan.
Mid ka mid ah tusaale ahaan in muujineysa wanaagga deegaanno bespoke for jirrabaya aragtiyaha la taaban karin waa tijaabo ah shaybaarka digital by Gregory Huber, Seed Hill, iyo Gabriel Lenz (2012) . Tijaabada baadhayaa a xaddidaadda la taaban karo ay suuragal tahay in hawlaha maamul dimuqraadi ah. Horaantii waxbarashada non-tijaabada doorashada dhabta ah ayaa sheegaya in cod ma awoodaan inay si sax ah loo qiimeeyo waxqabadka siyaasiyiinta xilka. Gaar ahaan, cod u muuqdaan in dhibaato ay ka soo saddex eexasho: 1) diiradda dhawaan halkii qaab wadareed, 2) manipulatable by cod karsanaa, la tukado, iyo suuq-geynta, iyo 3) u saameeyay dhacdooyin la xidhiidhin qaab korkanaga ah, sida guusha kooxda ciyaaraha maxalliga ah iyo cimilada. Meelahaas waxaa waxbarashada hore, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd adag tahay in la go'doomiyo mid ka mid ah arrimahaasi waxay ka dhammaan alaabtii kale oo dhaca, doorashooyinka kharriban dhabta ah. Sidaa darteed, Huber iyo asxaabtii abuuray jawi cod sare leh fududeeyey si ay u jaraan, oo markaas experimentally baran, mid kasta oo ka mid ah saddex eexasho suurto gal.
Sida aan u sharaxo set-up tijaabo u hoos ku socda inay ka dhawaajiyaan aad macmal ah, laakiin xusuusnow in xaqiiqo ma aha goolkii in tijaabo shaybaarka-style. Saas ma aha, hadafka la leeyahay waa in ay si cad u jaraan hanaanka in aad isku dayayaan in ay wax ka barato, iyo this go'doomin dhagan mararka qaarkood waa suurto gal ahayn in waxbarashada la xaqiiqo dheeraad ah (Falk and Heckman 2009) . Dheeraad ah, kiiskan gaarka ah, cilmi ku dooday in haddii cod aan wax ku ool ah loo qiimeeyo karaa qaab this meel sare fududeeyay, ka dibna ay ma si ay u awoodaan si ay u sameeyaan oo ay goob ka sii dhab ah, in ka badan oo adag.
Huber iyo asxaabtii isticmaalo Amazon Farsamada Turk (MTurk) inay qortaan ka qaybgalayaasha. Marka ka qayb bixiyo oggolaansho la wargeliyey oo maray tijaabada gaaban, iyada waxaa u sheegay in ay ka qeyb ciyaar 32 wareega si ay u helaan calaamadihii in loo roggi karo lacag dhab ah. Bilowga ciyaarta, ka qaybgale kasta waxaa loo soo sheegay in ay la qoondeeyey ah "allocator" in siin lahaa calaamadihii iyada oo lacag la'aan wareega kasta iyo in allocators qaar ka mid ah ay ahaayeen more deeqsi badan kuwa kale. Dheeraad ah, ka qaybgale kasta ayaa sidoo kale sheegay in ay leeyihiin lahaa fursad ay labada sii iyada allocator ama lagu qorayaa mid cusub ka dib markii 16 wareeg oo ciyaarta. Marka la eego waxa aad ogaato oo ku saabsan Huber iyo gool cilmi asxaabteena ", waxaad arki kartaa in allocator ka dhigan tahay dawlad iyo doorashada this ka dhigan tahay doorashada, laakiin ay ka qaybgalayaashu kuwo aan ogayn oo ka mid ah gool guud ee cilmi baarista. Guud ahaan, Huber iyo asxaabtii qorteen oo ku saabsan 4,000 oo ka qaybgalayaasha la siin jiray oo ku saabsan $ 1.25 waayo hawl in kaxaystay 8 daqiiqo.
Xusuustaa mid ka mid ah natiijooyinka ka soo baxay cilmi-baarista hore ahaa in abaal codbixiyayaasha oo cadaabana incumbents natiijooyin si cad u yihiin ka baxsan awoodooda, sida guusha ah kooxaha isboortiga deegaanka iyo cimilada. Si loo qiimeeyo in go'aamada ka qaybgalayaasha codbixinta waxa saamayn kara dhacdooyinka Gaarna random in ay goob, Huber iyo asxaabta ku daray bakhtiyaa ah in ay hab tijaabo ah. At midkood wareega 8-da ama wareega 16 (ie, ka hor fursad ay ku bedeli allocator ah) ka qayb-galayaasha ayaa kala sooc lahayn kaalinta bakhtiyaanasiibka halkaas oo qaar ka mid ah ku guuleystay 5000 dhibcood, qaar ka mid ah ku guuleystay 0 dhibcood, iyo qaar ka mid ah laga badiyay 5000 dhibcood. bakhtiyaa Tani waxaa loogu tala galay inuu shaabaho war wanaagsan ama xun oo ka madax bannaan yahay waxqabadka siyaasiga. Inkastoo ka qaybgalayaasha ayaa si cad u sheegay in bakhtiyaanasiibka ahaa xidhiidhin in waxqabadka ay allocator, natiijada bakhtiyaanasiibka weli saamayn go'aamada ka qaybgalayaashu '. Ka qaybgalayaasha in ka faa'iideystey bakhtiyaanasiibka waxay u badantahay inay dhawraan allocator, iyo saamaynta this ahayd xoog markii bakhtiyaanasiibka dhacay wareega 16-ka hor bedel ku go'aan-ka markii ay dhacday wareega 8 (Jaantuska 4.14). Natiijooyinkaasi waxay, oo ay la socdaan natiijooyinka dhowr tijaabo kale ee warqada, hogaaminayo Huber iyo shaqaalaheeda inay ku tirinnaa in xitaa goob la fududeeyay, cod ay ku adag tahay go'aamo xigmadda leh, natiijo in saamaysay cilmi mustaqbalka ku saabsan go'aanka cod-qaadashada (Healy and Malhotra 2013) . Tijaabada of Huber iyo asxaabtii ay muujinaysaa in MTurk waxaa loo isticmaali karaa si ay u qortaan ka qaybgalayaasha loogu talagalay tijaabo shaybaarka-style si hufan tijaabin aragtiyaha aad u gaarka ah. Waxa kale oo ay muujinaysaa qiimaha dhismaha aad jawi tijaabo gaar ah: way adag tahay in la qiyaaso sida hababka isku ayaa lagu go'doonsan yaabaa si nadiif ah oo ay goob kasta oo kale.
Jaantuska 4.14: Natiijooyinka ka Huber, Hill, and Lenz (2012) . Ka qaybgalayaasha in ka faa'iideystey bakhtiyaanasiibka waxay u badantahay inay ilaashadaan allocator, iyo saamaynta this ahayd xoog markii bakhtiyaanasiibka dhacay wareega 16-ka hor bedel ku go'aan-ka markii ay dhacday wareega 8.
Waxa intaa dheer in la dhiso tijaabo shaybaarka-sida, cilmi sidoo kale dhisi karaa tijaabo ku jira beerta-sida dheeraad ah. Tusaale ahaan, Centola (2010) dhisay tijaabo beerta digital inaad wax ka barato saamaynta dhismeedka network bulshada on faafidda dhaqanka. Isaga oo su'aal cilmi isaga baahan yahay si ay u dhawraan anshaxa isla faafo in dadka lahaa qaababka kala duwan ee shabakada bulshada, laakiin waxay ahaayeen kuwo si kale indistinguishable. Sida kaliya ee tan loo sameeyo la bespoke, tijaabo caadadii-dhisay ahaa. Xaaladdan oo kale, Centola dhisay bulshada web-ku salaysan caafimaad.
Centola qorteen oo ku saabsan 1,500 oo ka-qaybgalayaasha la advertising on websites caafimaadka. Marka ay ka qaybgalayaashu yimid bulshada oo online la odhan jiray nololeed Healthy Shabakadda-ay shardi ku wargeliyay ogolaansho ka dibna loo qoondeeyey "saaxiibada caafimaadka." Sababtoo ah sida Centola xilsaaray saaxiibada caafimaadka, wuxuu ahaa awoodaan in ay xidhantay dhismeedka wada duwan network bulshada ee kala duwan, kuwaas oo kooxaha. Qaar ka mid ah kooxaha la dhisay in ay leeyihiin shabakado random (halkaas oo qof kasta uu ahaa si siman ayay u badan tahay in lagugu xiro) iyo kooxaha kale ee la dhisay in ay shabakadaha loo habeeyo (halkaas oo xidhiidh badan yihiin gudaha cufan). Markaas, Centola soo bandhigay dhaqanka cusub galay oo shabag kastaa, fursad ay ku diiwaan website cusub oo macluumaad caafimaad oo dheeraad ah. Mar kasta oo qof kor u saxiixay website cusub, oo dhan ee saaxiibada caafimaadka iyada helay email ah ku dhawaaqay dhaqanka this. Centola ogaaday in this dhaqanka-saxiixa-up ee website-faafin dheeraad ah iyo si degdeg ah in shabakad ka fiido badan shabakadda random, lagu helo in ka gees ahayd in qaar ka mid ah aragtiyaha jira cusub.
Guud ahaan, dhismaha aad tijaabo gaar ah ku siinayaa gacanta ku sii badan; waxay awood aad si ay u dhisaan jawi ugu wanaagsan ee suurto gal ah in go'doomiyo waxa aad rabto inaad wax ka barato. Waa adag tahay in la qiyaaso sida mid ka mid ah tijaabo, kuwaas ayaa laga yaabaa in la sameeyaa in deegaanka oo hore u jiray. Dheeraad ah, dhismaha nidaamka adiga kuu gaar ah hoos u walaac anshaxa agagaarka tijaabinayaan ee nidaamka hadda jira. Marka aad dhisayso tijaabo u gaar ah, si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulanaa qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyinka ay la kulmeen in tijaabo shaybaarka: qoranayaan ka qaybgalayaasha iyo walaac ku saabsan xaqiiqo. Dhinaca A final waa in dhismaha aad tijaabo gaar ah waxay noqon kartaa mid qaali ah oo waqti badan cunta, in kastoo sida tusaale muujiyaan, tijaabo u dhaxayn karo deegaan fudud (sida daraasadda of codbixinta by Huber, Hill, and Lenz (2012) ) si bay'ada adag yara (sida waxbarasho ee shabakadaha iyo sadhaysan by Centola (2010) ).